Ngaba uyazi malunga nobukho bethala lencwadi lemilingo? | Uncwadi lwangoku
La umlingo Ihlala ingumxholo ophindaphindiweyo, ngakumbi kwiincwadi zamaphupha kunye neentsomi, nakwisifundo se-cinematographic, ukuba ngaba yindawo ekuchukumiseka kakhulu nengoku. Kodwa ubusazi ngobukho belayibrari yomlingo? Andi…. Ubuncinci kude kube ziintsuku ezimbalwa ezidlulileyo.
Ilayibrari yomlingo esithetha ngayo ikwi Manhattan Kwaye iqulethe Iincwadi ezintle ezinqabileyo. Enye into enomdla etsala umdla omkhulu kukuba inokufikelelwa kuphela ngokuqeshwa ... Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi malunga nokuba zithini kwaye zeziphi iincwadi esinokuzifumana kuyo, qhubeka ufunda kancinane ezantsi.
Nokuba uyakholelwa kumlingo okanye akunjalo ...
Kuya kufuneka uyazi ngobukho beli thala leencwadi. Siyazi ukuba u-Iker Jiménez kunye nababambisene naye kumabonwakude bangonwabela njengabantwana abanezihlangu ezitsha kwiipaseji zeli thala leencwadi, kodwa ngubani ongazange afune ukwazi okanye ngamanye amaxesha wabethwa yinto enxulumene nomlingo? Ngokubona nje ukufihla nobugqi ngalo mbandela uphathwa ngawo sele unika ngokwaneleyo ukucinga ...
Ngokusemthethweni, eli thala leencwadi liyazibiza Ukudibana kwiThala leeNcwadi loPhando lobuGcisa, kwaye ngaphakathi sinokufumana ezona ncwadi zibalulekileyo malunga nomlingo ngokubanzi. Ime kwindawo ekufutshane neManhattan, ngakumbi kwifayile ye- ático kunye nokufikelela kuyo Kuya kufuneka wenze idinga kwangaphambili kwaye uxele ukuba yintoni isizathu sokuba ube nomdla kwezi ntlobo zeencwadi. Lakhe umsunguli es UBill Kalush, eqinisekisa ukuba ngaphakathi kwezi ncwadi zininzi ulwazi olwahlukileyo lunokufumaneka okanye lwaziwe ngabantu abambalwa kakhulu emhlabeni.
Ezinye ze contact Ezichukumisayo zezi ngengqondo, i idayisi kunye nemidlalo yesandla, la ukufunda iileta, la I-cryptographynjl. Enye yeencwadi ezicelwe kakhulu ngabafundi abacela ukuba babonane kwaye yamkelwe phakathi kweminyango yayo ibhalwe kwi XV yekhulu kwaye ubizwa ngokuba «Ngobungakanani beentsholongwane ». Yeyona ncwadi indala ngomlingo eyakha yabhalwa.
Ngoku basebenza ekuhlaziyeni ikhathalogu yabo, kunye nokuguqulela uninzi lweencwadi zabo ezikwiilwimi ezahlukeneyo. Eyona nto ibalulekileyo kukuba nabo umxholo wedijithali kwi database enkulu ebizwa Buza uAlexander (Ebizwa emva kwengqondo eyaziwayo).
Ndithe, ukuba useManhattan kwaye ufuna ukonwabela eli thala leencwadi, qiniseka ukuba wenza idinga. Ungabona iincwadi ezindala kakhulu kwiishelufa zabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ngaba uyazi malunga nobukho bethala lencwadi lemilingo?
Kulungile kakhulu. Kodwa eMadrid kukho nelayibrari yokukhohlisa: kwiJuan Matshi Foundation.
UJorge Cuman (uManuc) sitsho
Enkosi kakhulu Fernando
Imibuliso evela Argentina
UJorge Cuman (umanuc)
Phendula u-jorge cuman (manuc)
UMerlin MacCaig sitsho
De viribus quantitates yincwadi ekwi-arithmetic, algebra kunye nejometri, ebhalwe nguLuca Pacioli, ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX. Ubudlelwane bakhe bungaphezulu kokukhanya kwesandla kunye nomlingo, ewe, kodwa inqanaba, ubuqhetseba kunye nokuthakazelisa ubuqhetseba bezibalo kunye namaqhina.
Phendula uMerlin MacCaig
Ifoto ayihambelani nelo thala leencwadi, andibi kunjalo?
Inqaku elilunge kakhulu, kodwa kungangcono ukuzekelisa ngefoto ekweli thala leencwadi. Lowo uvela kwiLayibrari yeTrinity College, eDublin
Indawo elungileyo kakhulu ndiyawuthanda umxholo
marivel perez sitsho
okugqwesileyo ndiyakuthanda oku
Phendula kumtshato perez
Ndiyalithanda eli phepha, umxholo walo unomdla.
indawo elungileyo kakhulu
Ndingathanda ukudibana nani nonke, kodwa kujongeka ngathi yinxalenye yeefilimu zikaHarry Potter, mhlawumbi ndibhidekile okanye ndingalunganga.